Mihantsy Ny Sivana Ireo Mpanao Sariitatra Ara-politika Amin’ny Fampisehoana Ny ‘Demokrasia’ Amin’ny Endrika Thailandey · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2015 6:20 GMT
Ity sariitatra nataon'i Sia ity dia mampiseho ireo firenena maromaro mandrisika an'i Thailandy mba hamerina ny demokrasia amin'ny laoniny. Ity ny valintenin'ny mpanongam-panjakana: “Tsy mahatakatra ianareo rehetra… Mamerina ny fahasambarana ho an'ny vahoaka Thailandey izahay.” Niparitaka be tao amin'ny media sosialy ny sariitatra raha “nasain'ny” tafika hanaraka “fanitsiana fihetsika” i Sia. Sary avy amin'ny @Thai_Talk
Na dia eo aza ny fitsipika hentitra mifehy ny haino aman-jery ao Thailandy, mbola manohy manasongadina ny fiantraika ratsin’ ny fitondrana miaramila amin'ny fahalalahana maneho hevitra ao amin'ny firenena ireo mpanao sariitatra ara-politika sasany.
Tsy miova ilay mpanao sariitatra frantsay Stephane Peray, fanta-daza kokoa amin'ny hoe Stephff , sy ilay mpanao sariitatra Thailandey, Sakda Sae Iew na Sia amin'ny fanehoana ny politika anti-demokratika ataon'ny governemanta tohanan'ny miaramila tarihin'ny lehiben'ny tafika teo aloha ary efa Praiminisitra ankehitriny Prayut Chan-o-Cha .
Naka fahefana an-keriny tamin'ny taona 2014 ny miaramila ary namolavola sata vonjimaika izay nanjary sata fototra amin'ny fametrahana governemanta sivily fantatra amin'ny anarana hoe Filankevi-pirenena ho an'ny Fandriampahalemana sy ny Filaminana. Nampanantena hanatontosa fifidianana i Prayut, saingy amin'ny fotoana rehefa vitan'ny miaramila ny fametrahana fanovana ara-politika sy ara-pifidianana ao amin'ny firenena.
Na dia teo aza ny fanesorana ny lalàna miaramila, mbola voaràra hatrany ny fihetsiketsehana ary “asain'ny” tafika ho any amin'ilay antsoina fa “fanitsiana fihetsika” ireo mpitsikera sasany. Tamin'ny volana lasa, nampanantsoin'ny tafika ilay mpanao gazety zokiolona noho ny fampielezana “vaovao diso” momba ny fitondrana miaramila.
Tamin'ny 4 Oktobra, natao famotorona tao amin'ny biraon'ny tafika ilay mpanao sariitatra ara-politika, Sia noho ny “votoaty tao amin'ny sariitatrany sasany izay tsy mampiseho ny zava-misy.” Navoaka tao amin'ny Thairath, gazety lehibe indrindra ao Thailandy ny sariitatr'i Sia. Milaza ny kabary nataon'i Prayut nandritra ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana tany New York ilay sariitatra tsinian'ny fitondrana miaramila.
Mampiseho an'i Prayut manamafy ny fankatoavan'ny governemanta ireo fitsipiky ny zon'olombelona sy ny fahalalahana miteny ilay sariitatra, na dia eo aza ny lisitra lava be misy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ataon'ny manam-pahefana
Famous cartoonist “Sia Thairath” summoned by junta for mocking Prayut's #UNGA speech & reality in #Thailand. pic.twitter.com/bti2W28dzj
Nampanantsoin'ny fitondrana miaramila ilay mpanao sariitatra malaza “Sia Thairath” noho ny famazivaziana ny #UNGA an'i Prayut’ sy ny zava-misy ao #Thailand.
Navotsotra ihany i Sia avy eo saingy nolazaina izy mba hampitsahatra ny fanehoana “zava-misy diso” amin'ny sariitatrany. Ity ambany ity ny sombiny tamin'ny antsafa nifanaovan'ny fampahalalam-baovao tamin'i Sia:
nilaza izy ireo fa manomboka androany, raha mahita izy ireo fa tsy maneho ny zava-misy ny sary sy ny sariitatra ataoko, dia hitory eny amin'ny fitsarana ary ho tompon'andraikitra aho.
Iray amin'ireo naneho fanohanana an'i Sia ny namana mpanakanto Stephff, izay mpanao sariitatra amin'ny gazety Thailandey The Nation ihany koa:
sariitatra ho an'ny ampitson'ny firenena – manantena tokoa aho fa hamoaka ity izy ireo mba hiaro ilay namana mpanao sariitatra
Tamin'ny fanehoana hevitra manoloana ny manjò an'i Sia, niditra tao amin'ny Twitter i Stephff, namoaka andiana fandinihana ara-kanto momba ny fitondran'i Prayut. Maro tamin'ny sariitatr'i Stephff no manampy amin'ny fahafantarana ary manazava ny ny fanimban'ny fanonganam-panjakana sy ny fitondrana miaramila ny demaokrasia ao Thailandy. Ohatra, mampiseho ny lehiben'ny tafika Prayut manendry ny tenany ho praiminisitry ny firenena ity tantara an-tsary ity :
tsara indrindra amin'i Prayut – Toon 1
Iray amin'ireo mariky ny fihetsiketsehana manohitra ny fitondrana miaramila ny fiarahabana amin'ny ratsa-tanana telo nalaina avy amin'ny sarimihetsika Hollywood “Hunger Games” (Lalaon'ny Hanoanana). Maneso ny lamin'ny fitondrana miaramila mandràra ny fiarahabana amin'ny ratsa-tanana telo ao amin'ny firenena ity sariitatra ity:
tsara indrindra amin'i Prayut – toon 15
Naka tahaka amin'ny fomba maneso ny teknika “fanitsiana fitondratena” tamin'ny alalan'ny sariitatra momba ny fitsidihan'i Prayut vao haingana tao amin'ny Firenena Mikambana ihany koa i Stephff.
tsara indrindra amin'i Prayut – toon 30
Mandritra izany fotoana izany, miresaka ny soso-kevitry ny governemanta hanivana sy hanara-maso ny votoaty amin'ny aterineto amin'ny alalan'ny fametrahana vavahady tokana amin'ny zotra anatiny sy ivelany ao Thailandy ity sariitatra ity, izay omen'ny mpitsikeraanarana hoe “Aro afo Goavan'i Thailandy”:
sariitatry ny – aro-afo goavan'i Prayut
Nilaza i Prayut fa nahavita nanafoana ny kolikoly ny governemantany, saingy maneho ny tsikeran'ireo mpanadihady sasany ity sariitatra ity fa tsy nanakana ny kolikolin'ny mpiara-dia aminy ny fitondrana miaramila:
tsara indrindra amin'i Prayut – toon 29
Farany, nandray ny lohahevitra amin'ny sarimiaina iray tao Hollywood “Inside Out (Anatiny-Ivelany) mba hanehoana ny fahitan'i Prayut hatrany an'i Thaksin, praiminisitra voahongana monina an-tsesintany any amin'ny firenen-kafa ity sariitatra ity
tsara indrindra amin'i Prayut – toon 14